1. Dad badan ayaa raadinaya qarsoodiga sawirka. Oo leh carshigii dhalinyarada Adoo qaab fiican ku leh sida lumiyo baruurta caloosha. Taasi oo ay u dheer tahay in dhalinyarada la soo celiyo Kudar galmo labis xiran oo kufiican qaabkasta. Sidoo kale waxaa ku xiga caafimaad wanaagsan In cidina na siin karin nafteena mooyee Maanta waxaan haysannaa tallaabo fudud, laakiin waxay u baahan tahay xoogaa dulqaad iyo edab. Haddii aad dhaafto, waxaa laguu ballan qaadayaa in sawirkaaga quruxda badan uu soo laaban doono hubaal.
2. Cab koob weyn oo biyo nadiif ah ka hor cuntada kasta. Qaabkani, marka lagu daro qurxinta maqaarkaaga Nidaamka Gaarka ah Sidoo kale waxay naga caawineysaa inaan si dhakhso leh u buuxinno Maxaa yeelay biyuhu waa qayb muhiim ah oo jirka ka mid ah Refresh maalintii Iyo biyo cabid 5 - 10 daqiiqo kahor cunista cunto kasta. Sidoo kale waxay naga dhigeysaa mid aad u dhaqso badan Sababtoo ah biyaha ayaa lagu soo raray digsiga cuntada markii hore darteed Laakiin waa inaan caado ka dhigtaa si joogto ah Ma aragtaa sida loo lumiyo dufanka caloosha? Ma dhib badna
3. Xullo inaad wax cuntid Si macquul ah waxtar leh Marka calooshu bilaabato inay timaado Waxay muujineysaa in nafaqadayada xulashada cuntada in badan la dayacay, sax? Waa caadi, markasta dib u bilow. Kala xulashooyinka cuntada ee taxaddarka leh, kuwaas oo muhiim u ah hababka luminta dufanka caloosha Waxa ugu horeeya waa inaad ka fogaato cabitaanada fudud. Macmacaanka sonkorta badan Cun cuntooyinka istaarjiin ka yar. Ama u beddelo bur waxtar leh sida badarka oo dhan Ama rooti, rootiga qamadiga si dhexdhexaad ah u cunno kasta Hadday tahay bariis, ka dib hal ladle oo cunto kasta ah. Ku dar cuntooyinka borotiinka ee lagama maarmaanka u ah dayactirka aagagga burburay. Iyo cuntooyinka leh faybar badan Ha iloobin in waxa cunitaanku u shaqeeyo jidhkaaga. Had iyo jeer waa xigasho la isku halleyn karo. Aynu dooranno si aan wax uga faa'iideysano jirka maanta laga bilaabo si ka wanaagsan.
4. Xullo jimicsi aad jeceshahay oo aad u sameyso si joogto ah Boqolaal dad ah ayaan jeclayn jimicsi isku mid ah. Marka ma doonayo inaan diirada saaro taas Waa inuu noqdaa jimicsi kasta ama jimicsi noocee ah, kaliya codso inay tahay layliga aan jecel nahay. Oo si joogto ah u samee, 3-5 maalmood usbuucii, iyadoo kuxiran habboonaanta Laakiin waa inaad si isdaba joog ah u sameysaa in ka badan 30 daqiiqo ilaa 1 saac taasoo kuxiran da'da iyo jir dhiska Dadka qaar waxay jecel yihiin socodka, orodka, yoga, qoob-ka-ciyaarka, baaskiil wadista, dabaasha, wadnaha, iwm. Waxaan dhihi karaa haddii ay si joogto ah u sameeyaan. Iyo waliba dabeecado kale Sida loo yareeyo baruurta caloosha Adigoon degdegin Baruurta caloosha ayaa tartiib tartiib loo yareyn doonaa, waxaana ku xigi doona mid caafimaad qaba Iyo dhalaal ahaan sida muuqata
5. Rajo muuji Iska yaree walbahaarka Si joogto ah u kordhi tamartaada wanaagsan iyo EQ. Tani waa waxa ugu adag in la sameeyo. Markaad iskudayeyso inaad xakameyso fikradaha, shucuurta, ama walbahaarka Inta aan nahay dad iyo noolba Laakiin isku day inaad wax fahanto Adduunyada in aan waxba la hubin Farxad ayaa nala joogtay muddo yar ka dib. Dhibaatadu way soo galeysaa dhowaan weyna dhaafi doontaa. Dhibaato kasta waxay leedahay xal, kaliya iska jir. Iyo waqtiga nasashada Sii naftaada tamar wanaagsan Culeyska u daa si ku meel gaar ah oo diiradda saar daryeelka jirkaaga marka hore. Ha u oggolaan in culeysku na yeelo. Walwalka badan ayaa kaa sii kordhaya inta aad wax cunayso Hadba culeys badan ayaa sii kordheysa Muhiimad ahaan, walwalku waa Cadaw caafimaadkeena nooc kasta
6. Fudud, oo aan adagayn haba yaraatee, xaqiiqdii, waa inaad daryeesho naftaada. Iyada oo ku timid inaad naftaada jeclaato oo aad waxyaabo fiican naftaada siiso markale Laakiin waxay u baahan tahay tababar joogto ah Maxaa yeelay caafimaadka wanaagsan iib maahan Haddii aad rabto, waa inaad adigu sameysaa.